Maxkamadda Midowga Yurub: Britain weey kasii mid ahaan kartaa Midowga Yurub - Halbeeg News
Maxkamadda Midowga Yurub: Britain weey kasii mid ahaan kartaa Midowga Yurub
in Caalamka, Soomaaliya
Brussels (Halbeeg)- Maxakamadda Midowga Yurub ayaa maanta ku dhawaaqday in xukuumadda Britain ay ka noqon karto go’aankeedii ay uga baxaysay Midowga Yurub iyada oo aanan ka talo galinin dalalka kale ee xubnaha ka ah Midowga.
Hadalka kasoo yeeray maxkamadda ayaa imanaya iyada maalinnimada berrita ah baarlamaanka Britain uu u ballansanyahay in uu codka kalsoonida u qaado hindisaha xukuumadda Britain ay hor geyneyso golaha kaasoo ay ku doonayso in Britain ay kaga baxdo midowga Yurub.
Maxkamadda oo ka jawaabeysa dacwad ay u gudbiyeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta Scotland ayaa tiri “Britain weey u madax bannaantahay in ay dib uga laabato go’aanka ay kaga baxayso Midowga yurub”.
Go’aanka kasoo baxay maxkamadda ayaa dab kusii shidaya doodda siyaasadeed ee haatan ka taagan dalka Britain ee ka dhalatay arrinka la xidhiidha ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub isaga oo sare u qaadaya jiijiidka iyo loollanka u dhexeeya dadka u ololeeynaya kasii mid ahaanshaha midowga iyo kuwa doonaya inay ka baxaan.
Hadalka maxkamadda ayaa la filayaa in uu sii kordhiyo culeyska lixaadka leh ee saaran ra’isul wasaare Tresa May oo dadka dalkeeda ugu gooddineysa in aan imika la joogin xilligii ay wax kala dooran lahaayeen balse looga fadhiyo in ay codka kalsoonida siiyaan hindisaha.
May ayaa mucaaradad xooggan kala kulmeysa gudaha baarlamaanka dalka Britain oo si weyn uga biya diiddan in Britain ay ka go’do Midowga Yurub, waxaana la rajaynayaa in xildhibaanno fara badan ay ka hor imaaadaan go’aankaas kaasoo walaac gelinaya Tresa May oo isu diyaarinaysa in khamiista ina soo aaddan ay ka qeyb gasho kulan madaxeedka Midowga Yurub ee loo madlanyahay inuu ka dhaco magaalada Brussels.
Hindisaha haatan horyaalla golaha baarlamaanka Britain ayaa yimid kadib markii dadweynaha Britain ay afti dadweyne u qaadeen kasii mid ahaanshahooda Yurub bartamihii sanaddii 2016-kii ilaa iyo xilligaasna xukuumadda UK waxay ku mashaquulsanayd qaabeynta heshiiskan oo haatan maraya marxalad aad u adag.
Kuweyt oo xayiraaddii ka qaadday xoolaha Soomaaliya
Apple oo soo saartay qalab lagula socdo dhaq-dhaqaaqa qofka xilliga uu hurdo